# မေလအတွက် (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင်Published May 2, 2013 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in မဟာဘုတ်, သင်္ချာဗေဒ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင်, ဒီလ ဗေဒင်, မဟာဘုတ်, မဟာဘုတ် ဗေဒင်, လစဉ် ဗေဒင်, ဧပြီလ, ဧပြီလ အတွက် ၇ ရက် သားသမီး ဗေဒင်, ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်, ၇ ရက် သားသမီး |3Comments	# မြန်မာသက္ကရာဇ် (၁၃၇၅)ခုနှစ် (၇)ရက်သားသမီး ဟောကိန်းများPublished April 19, 2013 | By Dr.Tin Bo Bo	.
မြန်မာသက္ကရာဇ် (၁၃၇၅)ခုအတွက် (၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် လေးကို နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ကတည်းက တင်ပေးချင်ပေမယ့် ရေးဖို့ မအားနိုင်တာကြောင့် ကနေ့မှ ရေးပေးလိုက်ရပါတယ်။
(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် ဟာ ယေဘူယျဟောကိန်း ဖြစ်ပေမယ့် တွက်နည်း (၄)(၅)မျိုး နဲ့ ညှိပြီး “မတူတာ ဖယ်၊ တူတာကို ယူ” – “ဘုံထုတ်” ပြီး တွက်မှ လူတိုင်းလောက် နီးပါးနဲ့ အကျုံးဝင်မှာ ဖြစ်လို့ လူတစ်ယောက်ခြင်း တွက်တာထက် ပိုခက်ပါတယ်။ ပိုဦးနှောက်စားပါတယ်။ (သူများတွေ ဘယ်လိုတွက်လည်းတော့ မသိဘူး)။ ဒါကြောင့် ရာဟုအပါအ၀င် (၈)နေ့နံကို တစ်နေကုန်ထိုင်တွက် ထိုင်ရေးတာတောင်မှ (၂)ရက်လောက် ရေးလိုက်ရပါတယ်။ ကဲ – ဖတ်ကြည့်ကြရအောင်လား ?
## တနင်္ဂနွေ သားသမီးများ ကံဇာတာ
ဒီနှစ်အတွက် တနင်္ဂနွေသားသမီးများ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေ တိုးတက်ကောင်းမွန်နိုင်တဲ့ နှစ်ဖြစ်တယ်။ ရည်မှန်းချက်တွေ အောင်မြင်လာမယ်။ လူငယ်လူရွယ်တွေ ၊ လူလတ်ပိုင်း စီးပွားရေးသမားတွေအတွက် ကံကောင်းမွန်တဲ့ နှစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ စပ်တူလုပ်ငန်း လုပ်ဖို့ အခွင့် အလမ်းတွေ ပေါ်ပေါက်တတ်ပြီး လုပ်ရင်လည်း အဆင်ပြေတိုးတက်ကိန်း ရှိပါတယ်။ အလုပ်အကိုင် အပြောင်းအလဲ လုပ်ချင်သူများအတွက် အပြောင်းအလဲဖြစ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုး ရှိမယ်။ ဒီနှစ်မှာ အလုပ်အကိုင်အတွက် ကံကောင်းမှုတွေ များနိုင်ပေမယ့် အစစအရာရာ သတိရှိဖို့တော့ လိုမယ်။ အလောတကြီး အလျှင်စလို ပြုမူတာမျိုး မလုပ်သင့်ဘူး။ ချင့်ချင့်ချိန်ချိန် သတိထားလုပ်ဖို့တော့ လိုမယ်။ “အလှမ်းကျယ်လို့ အလယ်လပ်” တတ်တဲ့ အဖြစ်မျိုး ကြုံနိုင်တယ်။
Posted in မဟာဘုတ်, ဟူးရားဗေဒင်, အင်္ဂ၀ိဇ္ဖာ/မဟာကာလ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged ဒီနှစ် ဗေဒင်, မဟာဘုတ် ဗေဒင်, ဗေဒင် 2013, ဗေဒင် ၁၃၇၅ ခုနှစ်, မြန်မာသက္ကရာဇ် (၁၃၇၅) ခုနှစ် (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်, ၇ ရက် သားသမီး, နှစ်ဆန်း ဗေဒင်, နှစ်သစ်ကူး ဗေဒင် | 29 Comments	# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင်Published March 26, 2013 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in မဟာဘုတ်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင်, ဒီလ ဗေဒင်, မဟာဘုတ်, မဟာဘုတ် ဗေဒင်, လစဉ် ဗေဒင်, ဧပြီလ, ဧပြီလ အတွက် ၇ ရက် သားသမီး ဗေဒင်, ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်, ၇ ရက် သားသမီး | 44 Comments	# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂)Published March 20, 2013 | By Dr.Tin Bo Bo	မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် အပိုင်း (၁)ကို ၂၀၁၀ ခုနှစ် မတ်လထဲမှာ စ, တင်ပေးလိုက်တဲ့ အချိန်ကစပြီး ယနေ့အချိန်အထိ အဖတ်အများဆုံး ဆောင်းပါးထဲမှာ နံပါတ်(၄)နေရာ ကို ချိတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ၀င်ရောက်ဖတ်ရှုသူဦးရေ သုံးသောင်းနီးပါး ရှိခဲ့တယ်။ တိုက်ဆိုင်မှု အတော်ရှိတယ်လို့လည်း အကြောင်းပြန်ကြားချက်တွေ ကြားရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခက်တာက ယနေ့အချိန်အထိ အဲဒီတွက်နည်းကို ကောင်းကောင်း မတွက်တတ်ကြတဲ့ သူတွေ ရှိနေသေးတယ်။ တစ်ချို့ကြပြန်တော့လည်း မှန်အောင်တော့ တွက်တတ်ပါတယ် - ဒါပေမယ့် အဖြေကို ကောင်းကောင်းမထုတ်တတ်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရတဲ့ ဂြိုဟ်တွေက မွေးနံဂြိုဟ်အပါအ၀င် (၆)လုံးတောင် ဖြစ်နေတော့ အပေါ်အောက် ဂြိုဟ်တွေ ပြန့်ကျဲနေရင် အကောင်းအဆိုး ဘာပြောရမှန်း မသိကြတော့ဘူး ဆိုတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်နည်းကို ဒီထက် လွယ်ကူအောင် စဉ်းစားရပါတော့တယ်။ လွယ်ကူတဲ့ နည်းသစ်ကလေးတွေ တီထွင်ရပါတယ်။ တီထွင်ယုံနဲ့ မပြီးဘဲ လက်တွေ့မှန်ကန်မှုကော ဘယ်လောက်ရှိလဲ ဆိုတာကို စမ်းသပ်ရပါသေးတယ်။ လက်တွေ့မှန်ကန်မှု (၇၀)% အထက်ရှိပြီဆိုတဲ့ နည်းကိုသာ ရွေးချယ်လိုက်ပြီး (၇၀)% အောက်ဆိုရင် ပယ်ပစ် လိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ပိုမိုလွယ်ကူတဲ့ မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်နည်း လေးတွေ ထပ်မံရရှိလာပါတယ်။ အဲဒီထဲက လွယ်ကူတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုကို “မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်နည်း (၂)” အဖြစ် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ စာဖတ်သူများအတွက် တွက်ရ/ဟောရ ပိုမိုလွယ်ကူတဲ့ နည်းလမ်းလေးတစ်ခု ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ —————————————————————————————————————-
ယခင် “မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ်” ဆောင်းပါးကို မဖတ်ဘူးသူများအတွက် “မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်တယ်” ဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတာကို ပြန်ပြောပြပါဦးမယ်။ မွေးနေ့ဗေဒင်ဆိုတာ နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်း ကိုယ့်မွေးနေ့ကို ကျရောက်လာပြီဆိုရင် ရှေ့လာမည့် တနှစ်တာကာလရဲ့ ကံဆိုးကံကောင်းကို (လူတော်တော်များများ) သိချင်ကြပေလိမ့်မယ်။ အဲသည်လို တစ်နှစ်စာ အကောင်း/အဆိုးတွက် မွေးနေ့ကျရောက်တဲ့ “အဲဒီနေ့” ရဲ့ Data အချို့ကို ကောက်ယူပြီး တွက်ချက်တဲ့ နည်းပါ။ ယခင်တွက်နည်း (၁)က “မဟာဘုတ်” တွက်နည်းဖြစ်ပြီး ယခု တွက်နည်း (၂)ကလည်း “မဟာဘုတ်” တွက်နည်းပါဘဲ။ နောက်ထပ် “ဂဏန်းဗေဒင်” နည်းနဲ့ တွက်တဲ့နည်းတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ အလျှဉ်းသင့်သလို တင်ပြပေးသွားပါမယ်။
Posted in မဟာဘုတ်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged ကိုယ်တိုင်တွက် ဗေဒင်, မဟာဘုတ် ဗေဒင်, ဗေဒင်, ဗေဒင် ကိုယ်တိုင်တွက်နည်း, မွေးနေ့ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | 132 Comments	# မတ်လ အတွက် (၇)ရက်သားသမီး ဟောကိန်း အကျဉ်းPublished March 1, 2013 | By Dr.Tin Bo Bo	(အပျင်းပြေဖတ်ရန်မျှသာ)
Posted in မဟာဘုတ်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင်, ဒီလ ဗေဒင်, မတ်လ, မတ်လ အတွက် ၇ ရက် သားသမီး ဗေဒင်, မဟာဘုတ်, မဟာဘုတ် ဗေဒင်, လစဉ် ဗေဒင်, ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်, ၇ ရက် သားသမီး |2Comments	# ယနေ့ မွေးဖွား ရင်သွေးများ (Today’s Born Babies)Published December 3, 2012 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in နာမက္ခရဗေဒ, မဟာဘုတ်, သင်္ချာဗေဒ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged နာမည်ပေး ဗေဒင်, နာမည်ပေးနည်း, ရင်သွေး ကံကြမ္မာ, နေ့စဉ် ဟောကိန်း, နေ့စဉ်မွေးဖွား ရင်သွေးများ, ဗေဒင်, ဗေဒင် online, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | 69 Comments	# အောက်တိုဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများPublished October 1, 2012 | By Dr.Tin Bo Bo	.
ယခုလအတွက် တနင်္ဂနွေသားသမီးများ အတိုက်အခံ ၊ ရန် အခက်အခဲ နှင့် ယှဉ်သော အောင်မြင်မှုများကို ရရှိနိုင်လိမ့်မည်။ အပြိုင်အဆိုင် ယှဉ်ပြိုင်ရသော လုပ်ငန်းများတွင် အောင်မြင်မှု ရရှိမည်။ လူမှုဆက်ဆံရေးပိုင်း အောင်မြင်မည်။ လူအများ၏ ထောက်ခံမှုကို ရရှိမည်။ ငွေကြေးကိစ္စ ကံကောင်းနိုင်သလို စိတ်ပူစရာလည်း ရှိမည်။ ငွေဝင်ကိန်း ငွေထွက်ကိန်း (၂)မျိုးလုံး ရှိနေမည်။ အချို့ ကံဇာတာညံ့သော အသက်ပိုင်းများအတွင်း ရောက်ရှိနေသော တနင်္ဂနွေသားသမီးများ ငွေကြေးအတွက် အလွန်ပူပင်သောက ရောက်ရဖွယ်ရှိသည်။ ငွေရေးကြေးရေး ပြဿနာ တက်နိုင်သည်။ ငွေအတွက် ခေါင်းခဲစရာ ကိစ္စများ ကြုံနိုင်သည်။ ငယ်ရွယ်သူများ အချစ်ရေးကိစ္စ အဆင်ပြေမည်။ ချစ်သူစုံတွဲများ သဒ္ဓါလွန်၍ တဏှာကျွံတတ်သည်။ ဆယ်ကျော်သက်များ အပေါင်းအသင်း စုံသောကြောင့် လိင်ကိစ္စများရှုတ်ထွေးမိတတ်သည်။ ကျောင်းသူကျောင်းသားများ ပညာရေးကံ အနည်းငယ် နိမ့်ကျနေမည်။ ကျန်းမာရေး ချူခြာနေမည်။ ဦးနှောက် အာရုံကြော ၊ အစာအိမ် ၊ နှလုံး ၊ ခြေထောက် ပိုင်းတွင် အားနည်းချက်များ ရှိနိုင်သည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက် စာနယ်ဇင်း နှင့် ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ ၊ ၀န်ဆောင်မှု နှင့် အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းများ ၊ လှောင်ကုန်လုပ်ကိုင်သူများ ၊ စက်ပစ္စည်း ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူများ ၊ ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်းလုပ်သူများ အကျိုးများလိမ့်မည်။ ခရီးသွားလာခြင်း နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများ ကံမကောင်းနိုင်သေးပါ။
ယခုလအတွက် နာမည်တွင် – တနင်္ဂနွေ စ,ပြီး ဗုဒ္ဓဟူး ၊ စနေ ၊ အင်္ဂါ နံများဖြင့် ပိတ်ထားသော နာမည်ပိုင်ရှင်များ ကံကောင်းမှုများကို ပိုမိုရရှိနိုင်သည်။ တနင်္ဂနွေဖြင့် အစပြုပြီး တနင်္ဂနွေ ၊ တနင်္လာ ၊ ကြာသပတေး ၊ သောကြာ နံများဖြင့် ပိတ်ထားသော နာမည်ပိုင်ရှင်များ ကံဇာတာ အညံ့ဖက်ပိုမိုနိုင်ပြီး ကျန်းမာရေး အထူးဂရုပြုပါ။
ယတြာပြုလုပ်လိုပါက – မွေးနေ့ တနင်္ဂနွေနေ့ တစ်ရက်တွင် ဈေးထဲမှ အသတ်ခံရတော့မည့် ငါးအရှင်များ (အရေအတွက် မိမိတတ်နိုင်သလောက်) ၀ယ်ပြီး မြစ်ချောင်းများအတွင်း လွှတ်ပြီး ဇီဝိတဒါန ပြုလိုက်ပါ။
Posted in နာမက္ခရဗေဒ, မဟာဘုတ်, ဟူးရားဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင်, စက်တင်ဘာလ, နာမက္ခရ ဗေဒင်, မဟာဘုတ် ဗေဒင်, ဟူးရား ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်	# စက်တင်ဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများPublished September 1, 2012 | By Dr.Tin Bo Bo	.
ယခုလအတွက် တနင်္ဂနွေ သားသမီးများ ကံဇာတာ ကောင်းမွန်တိုးတက်မည့် လ, ဖြစ်သည်။ မိသားစုဘ၀ ပျော်ရွှင်ရမည်။ ဝေးကွာနေသော မိသားစု မိတ်ဆွေများနှင့် ပြန်လည် ဆုံဆည်းခွင့်ရှိသည်။ အချို့သော တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက် ဘ၀အပြောင်းအလဲ တစ်ခု ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။ ကောင်းသော အပြောင်းအလဲဖြစ်မည်။ ၀န်ထမ်းများ ရာထူးတက်ကိန်း ရှိသည်။ အလုပ်အကိုင် အသစ် ရှာဖွေနေသူများ အလုပ်အကိုင်ကောင်း ရရှိမည်။ ငယ်ရွယ်သူများ ပညာရေးကံ ကောင်းနေမည်။ အိုးအိမ်အဆောက်အဦး (အိမ်ခြံမြေ) နှင့် ပတ်သက်ပြီး ကောင်းကျိုးများ ခံစားရမည်။ ယာဉ်ကားကိစ္စ ထူးထူးခြားခြား မကောင်းသေးပါ။ ပါမစ် ၊ တင်ဒါ စသည်များ လျှောက်ထားသူများ ၄င်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး အကျိုးခံစားရမည်။ လေကြောင်းခရီး သွားလာရကိန်း ရှိသည်။ နာမည်နှင့် အသက်မွေးသူများ နာမည်ကျော်ကြားမည့် လ, ဖြစ်သည်။ အချို့သောသူများတွင် “ထီပေါက်ကိန်း” ရှိနိုင်သည်။ ကုန်သည် ၊ ဘဏ်လုပ်ငန်း ၊ အကြီးအကဲ ရာထူးများတွင် တာဝန်ယူရသူများ အကျိုးပေးမည့် လ, ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ ယေဘူယျ ခြုံပြောရလျှင် ယခုလသည် (သက္ခတ် အညံ့ထဲတွင် ရောက်နေသော သူများမှ လွဲ၍ တနင်္ဂနွေသားသမီး အတော်များများ ကံကောင်းမှု အလွန်များနိုင်သည့် လ, ဖြစ်သည်ဟု ဆိုရပေမည်။
ယခုလအတွင် နာမည်တွင် တနင်္ဂနွေ စ,ပြီး – တနင်္ဂနွေ နှင့် ကြာသပတေး ပိတ်သူများ ထူးခြားသော ကံကောင်းမှုများကို ရရှိနိုင်ချေရှိသည်။ အင်္ဂါ နှင့် ဗုဒ္ဓဟူး နှင့် ပိတ်သောသူများ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း မပြေလည်မှုများ ၊ ပဋိပက္ခများ အနည်းငယ် ကြုံနိုင်သည်။ တနင်္လာ ၊ သောကြာ ၊ စနေ ပိတ်သောသူများ ကံကောင်းမှုများကို လျော့နည်းစွာ ခံစားရဖွယ် ရှိသည်။
Posted in မဟာဘုတ်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင်, စက်တင်ဘာလ, နာမက္ခရ ဗေဒင်, မဟာဘုတ် ဗေဒင်, ဟူးရား ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်	# သြဂုတ်လ အတွက် နာမည်သင်္ချာ ဟောကိန်းများPublished August 21, 2012 | By Dr.Tin Bo Bo	လစဉ်ဟောကိန်းတွေကို ကျွန်တော် ပုံမှန်တွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပုံမှန်မတင်ဖြစ်ပါဘူး။
Posted in မဟာဘုတ်, သင်္ချာဗေဒ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged ဂဏန်းဗေဒင်, နာမည်သင်္ချာ, သင်္ချာဗေဒ, သြဂုတ်လ	# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင်Published March 31, 2012 | By Dr.Tin Bo Bo	.
တနင်္ဂနွေ သားသမီးများအတွက် ယခုလမှာ ကံဇာတာ အကောင်းအဆိုး ရောနှောနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အိုးအိမ် ခြံမြေ ကိစ္စ ၊ အလုပ်အကိုင် တိုးတက်ရေး အခွင့်အလမ်း ကိစ္စတွေမှာတော့ ကံကောင်းမှုများကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။ အိုးအိမ် ခြံမြေ အသစ် ၀င်ရောက်ကိန်း (သို့) ၀ယ်ယူပြီး အိုးအိမ်ခြံမြေမှ အကျိုးအမြတ်ရကိန်းများ ရှိတယ်။
ပညာရေးကံကောင်းနေတာမို့ စာမေးပွဲ ဖြေဆိုထားသူများ ၊ ဖြေဆိုမည့်သူများ အဆင်ပြေချောမွေ့နိုင်တယ်။ တနင်္ဂနွေ ၊ အင်္ဂါ နဲ့ ကြာသပတေး သက္ခတ်များအတွင်း ရောက်နေသူများ လုပ်ငန်းများ တိုးတက်ခြင်း ၊ တိုးချဲ့ရခြင်းများ ကြုံရနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလမှာ တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက် လက်အောက်ငယ်သားများရဲ့ မရိုးသားမှုများကြောင့်၎င်း ၊ သစ္စာမရှိမှုများကြောင့်၎င်း ၊ ကိုယ်ပါ ရောပြီး နာမည်ပျက်ကိန်းရှိတယ်။ ဒီလမှာ လက်အောက်လူ ၊ လူမျိုးခြား ၊ ဘာသာခြားတွေ ဒုက္ခပေးနိုင်တယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ နာမည်သတင်းနဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာများ ကျဆင်းနိုင်တဲ့ ကံကြမ္မာမျိုး ရှိနေတယ်။
ငွေကြေးကတော့ အ၀င်များရင်လည်း များမယ်။ ဒါပေမယ့် အဖတ်မတင်တတ်ဘူး။ အိတ်ပေါက်နဲ့ ဖားကောက်ရသလို ဖြစ်တတ်တယ်။ မကောင်းတဲ့ သက္ခတ်များအတွင်း ရောက်နေသူများ ငွေကြေး အဆုံးအရှုံး များတတ်ပါတယ်။ ဒီလမှာ တနင်္လာနံတွေဖြစ်တဲ့ ငွေ ၊ မိခင် ၊ ကား နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကိစ္စတွေမှာ ကံမကောင်းဘဲ ဖြစ်နေတတ်တယ်။ နဂိုကတည်းက ကိုယ့်မိသားစု နဲ့ အေးအေးချမ်းချမ်း နေလိုသူများ ၊ တင်းတိမ်ရောင့်ရဲ လွယ်သူများအတွက်တော့ ဒီလဟာ မိသားစုနဲ့အတူ အေးချမ်းသာယာစွာဖြင့် အနားယူနိုင်ပြီး စိတ်ချမ်းသာရမယ့် လ, တစ်လဖြစ်လိမ့်မယ်။ သူတို့အတွက်တော့ အကောင်းဟောရမယ်။
နဂိုကတည်းက အလုပ်ကြီးအကိုင်ကြီးတွေနဲ့ မနိုင်ဝန် ထမ်းနေကြသူတွေ ၊ လောဘသက္ကာယ ကြီးမားတတ်ကြတဲ့ တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်တော့ ဒီလဟာ ဖင်မနိုင် ခေါင်းမနိုင်ဖြစ်ပြီး စိတ်ပင်ပန်းရမယ့် လ,ဖြစ်တယ်။ အလုပ်ကြီးအကိုင်ကြီး လုပ်သူများ ဒီလထဲမှာ လူယုံ သစ္စာဖောက်တတ်လို့ သတိအထူးပြုရမယ်။
ယခုလအတွက်- နာမည်မှာ - တနင်္ဂနွေ စ,ပြီး တနင်္ဂနွေ ၊ ကြာသပတေး နဲ့ ဆုံးထားသူများ ကံဇာတာကောင်းမွန်မှုများကို အထူးရရှိခံစားရပါလိမ့်မယ်။ - တနင်္ဂနွေ စ,ပြီး အင်္ဂါ နံနဲ့ ဆုံးထားသူများ လူပင်ပန်း ၊ စိတ်ပင်ပန်းမှု များလိမ့်မယ်။ - တနင်္ဂနွေ စ,ပြီ ဗုဒ္ဓဟူး(ရာဟု)ဆုံးထားသူများ အိမ်ထောင်ရေးပြဿနာ ၊ အိမ်ရှင်အိမ်ငှားပြဿနာ ၊ အိုးအိမ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အမှုအခင်းများ ကြုံရဖွယ် ရှိတယ်။ “ရေ” နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဥပဒ်ပေးနိုင်လို့ သင်္ကြန်တွင်း ရေကစားလျှင် သတိပြုပါ။
- တနင်္ဂနွေ စ,ပြီး တနင်္လာ (သို့) သောကြာနံများနှင့် ဆုံးထားသူများ ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းခြင်း ၊ အလုပ်နေရာ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်ခြင်း၊ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်ခြင်းများ အထူးကြုံတွေ့နိုင်တယ်။
- တနင်္ဂနွေ စ,ပြီး စနေနံ ဆုံးသူများ လက်အောက်လူ ၊ လူမျိုးခြား ဘာသာခြား နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထိခိုက်နစ်နာစရာ ကိစ္စတွေ ကြုံရနိုင်တယ်။ နာမည်ပျက်ကိန်း ရှိတတ်တယ်။
ယတြာပြုလုပ်လိုပါက - မိမိနေအိမ်ဘုရားမှာဖြစ်ဖြစ် ၊ တန်ခိုးကြီးဘုရားမှာဖြစ်ဖြစ် - တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက်စောစောမှာ “ပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက်ပွင့်” ကို ဆီဆမ်းပြီး ကပ်လှူပူဇော်လိုက်ပါ။
Posted in မဟာဘုတ်, ဟူးရားဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်	# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင်Published March 3, 2012 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in မဟာဘုတ်, အင်္ဂ၀ိဇ္ဖာ/မဟာကာလ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged (၇)ရက် သားသမီးများအတွက် ဟောကိန်းများ, (၇)ရက် ဗေဒင်, ingaweikzar, MaHaBote, Myanmar Astrology, myanmar zodiac, မြန်မာ့ ရိုးရာ ဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်	# ကား ရောင်းမှာလား ၊ လဲ မှာလားPublished September 28, 2011 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in မဟာဘုတ်, ဟူးရားဗေဒင်, အမှာ သတင်းစကား, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged MaHaBote, Mahakarlagyi, Myanmar Astrology, Myanmar Astrology 2011, myanmar horoscope, myanmar zodiac, မဟာကာလကြီး, မဟာဘုတ်, အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာ, ဗေဒင်, မြန်မာ ဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်	← Older posts
# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင် (57,702)# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,971)# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,782)# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁) (31,366)# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်း (23,425)# (3)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (14,572)# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,593)# (8)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,953)# (9)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,294)# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (10,273)# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (10,100)# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (10,051)# မဟာဘုတ် စစ်တမ်း (9,834)# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော? (9,800)# နဂါးနှစ် လာပြီ (9,303)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂) (9,133)# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ (8,835)# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူ (8,494)# အောက်တိုဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (8,184)# (1)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (8,175)# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (7,828)# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (7,683)# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂) (7,606)# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင် (7,551)# စက်တင်ဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,261)# (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ (7,242)# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . . (6,906)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၁) (6,691)# (၇)ရက်သားသမီးများအတွက် သြဂုတ်လ ဟောကိန်းများ (6,478)# စကား (၆) ခွန်း လူ၌ထွန်း (6,025)	အားပေးတယ်ဆို Like လုပ်ခဲ့နော် !